Maninona i Gokai - Shanghai Gokai Industrial Co., Ltd.
Mpanamboatra matihanina ny birao sy ny ravina
Shanghai Gokai Industry Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, famolavolana, famokarana tabilao fisorohana PVC, Takelaka akrilika indrindra. Niorina tamin'ny taona 2009 ny orinasa, misy orinasa 2, tsipika famokarana 10, ny foibe dia any Shanghai, Sina. Nampiditra fitaovana famokarana mandroso sy teknolojia fanodinana izahay, ary koa ireo fitaovana manerantany sy fanandramana manankarena amin'ity fizotrany ity. Ireo rehetra ireo dia ahafahan'i Gokai mamokatra tabilao vita amin'ny PVC, akrilika vita amin'ny kalitao tena tsara kalitao. Izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra takian'ny tsena.
Ny vokatray dia aondrana any ivelany indrindra, toa an'i Arzantina, Brezila, Kanada, Nizeria, Mexico, Arabia Saodita, UAE, UK, USA, Malezia, Thailand, Vietnam, Espana, Romania, Algeria erak'izao tontolo izao. Mpamatsy vola SGS ihany koa izahay. Ary mandalo ny fanamarinana CE. Mifantoka amin'ny kalitao izahay fa mampiasa fomba fanaraha-maso fanaraha-maso kalitao henjana mba hahazoana antoka fa azo itokisana ny kalitaon'ny vokatra.
Gokai an'ny Board Foam an'ny PVC:
Izy io koa dia nantsoina hoe takelaka vita amin'ny PVC. Ny hatevin'ny 1mm ka hatramin'ny 30mm. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny fanaka, dokam-barotra, akora fananganana, haingon-trano ary fampiharana indostrialy ary sehatra hafa.
Gokai an'ny takelaka akrilika:
Ary koa nantsoina hoe plexiglass sheet. Manolotra takelaka akrilika Cast sy taratasy akrilika Extrude izahay, ravin-kavina acrylic, takelaka torolàlana momba ny jiro akrilika, takelaka akrilika ampiasaina amin'ny doka, jiro, indostrian'ny fananganana, sary sokitra, haingon-trano ary koa ao amin'ny fandroana, ny fandroana. Matevina 1-500mm. Ny fizotry ny famokarana mandroso dia manome antoka fa ny akrilika dia manana hamafisana, tanjaka ary fanoherana mahery vaika.
Maninona no mifidy anay？
Manana tsipika famokarana 10 izahay, 1 * 20GP manodidina ny 10 andro hatramin'ny vita, 1 * 40GP manodidina ny 15 andro vao vita.
Manana mpiasa 200 izahay, injeniera teknika mihoatra ny 20 ary 80% amin'izy ireo no manana mari-pahaizana bakalorea.
Fanaraha-maso henjana henjana
Virijiny 100% ny akora manta.
Kitapo fanondranana sy kabinetra manokana.
Ny tabilao vita amin'ny PVC dia mampiasa kitapo plastika misy mpiambina zorony, na boaty baoritra sy paleta hazo.
Kitapo plastika misy mpiambina zorony
Export paleta hazo
Mametraka fitoeran-kitapo platic
Manisy kaontenera boaty boaty
Manisy fitoeran-javatra vita amin'ny paleta hazo
Ny ravina akrilika dia mampiasa sarimihetsika PE na taratasy kraft, avy eo nampiasa pallet hazo.
Sarimihetsika PE na kraft taratasy roa
Paleta hazo fonosana
OEM & ODM ekena
Ny habe sy ny hateviny ary ny loko namboarina dia misy. Tongasoa eto hizara ny hevitrao aminay, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
TEKASA GOKAI SY NY kolontsaina CORPORATE
Ny orinasa dia manaraka ny tsy fivadihan'ny vato fehizoro, ny kalitaon'ny fahavelomana, ny siansa ary ny fanavaozana ny teknolojia satria ny hery manosika, ny fikatsahana ny hatsarana, dia mamorona kalitao miavaka. Vonona izahay hiara-hiasa am-pahatsorana amin'ireo mpanjifa ao an-trano sy any ivelany hanaraka ny fotoana ary hamorona famirapiratana miaraka.
manao ny marina
Manaraka hatrany ny fitsipika, mifantoka amin'ny olona, ​​fitantanana tsy fivadihana i Gokai. kalitao avo indrindra, laza premium.
Ny fanavaozana no votoatin'ny kolotsaina Gokai.
Ny fanavaozana dia mitarika amin'ny fampandrosoana, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny tanjaka, Avy amin'ny fanavaozana ny rehetra.
Ny andraikitra dia mahatonga ny olona hanana fikirizana.
Gokai dia manana fahatsapana andraikitra lehibe sy iraka ho an'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Io foana no hery manosika ny fampandrosoana an'i Gokai.
Ny fiaraha-miasa no loharanon'ny fampandrosoana.
Ny fiaraha-miasa mba hamoronana toe-javatra mandresy dia heverina ho tanjona lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Amin'ny fanatanterahana mahomby ny fiaraha-miasa amin'ny fahamendrehana,
GOKAI an'ny klinika ary manombatombana
ASA MAHATELO IZAY NATAON'NY ekipanay HO AN'NY CLIENTSIKA!
Fitsidihan'ny mpanjifa ny fampirantiana Gokai
Fifampiraharahana amin'ny orinasa
Pvc foam board of order: 5 Star
Takelaka filaharana akrilika: Kintana 5